Kedu ka esi emewanye ọsọ nke WiFi Ọ dị nwayọ? O nwere ike ịbụ n'ihi nke a | Akụkọ akụrụngwa
Otu esi eme ka ọsọ WiFi dị n'ụlọ anyị
Ignacio Sala | | Home, Nkuzi
Mgbe ị na-eke njikọ Wi-Fi n'ụlọ anyị, a ghaghị iburu ihe dị iche iche n'uche ebe ọ bụ na ọ bụghị ihe niile mara mma dịka ọ nwere ike ịdị na mbụ. Tupu njikọ ikuku ghọrọ usoro a na - emebu ma dịkwa ọnụ ala iji mepụta netwọkụ na ọfịs ma ọ bụ ụlọ anyị, ụdị eriri RJ45 bụ usoro eji eme ihe. Isi uru nke eriri na-enye anyị bụ na enweghị ọsọ ọsọ, ihe na-anaghị eme na njikọ ikuku. N’isiokwu a anyị ga-akụziri gị esi melite ọsọ nke WiFi gị yabụ ị nwere ike nweta ọtụtụ ntanetị gị na ntanetị.
Dị ka iwu n'ozuzu, oge ọ bụla onye ọrụ kwekọrọ na ya rutere n'ụlọ anyị iji wụnye njikọ Internetntanetị kwekọrọ, ọ dị mwute na n'oge ole na ole ọ na-ajụkarị anyị ebe anyị chọrọ ịwụnye router nke ga-enye anyị ohere Internetntanetị. Dịka iwu n'ozuzu, a na-etinye ya n'ime ụlọ dị nso na ebe eriri okporo ụzọ dị. N’ụzọ dabara adaba, ụlọ ahụ na-adịkarị n’ebe kacha dị anya n’ụlọ, yabụ njikọ willntanetị agaghị eru na nsọtụ ọzọ nke ụlọ na-enweghị enyemaka.
Ọ dabara nke ọma, anyị nwere ike ịkatọ ndị ọkachamara ahụ wụnye njikọ ahụ ka anyị mee. n’ebe kacha mma n’ụlọ anyị nke mere na anyi ekwesighi iji ndi ogwugwo ike iji nye Wi-Fi ulo anyi nile. Chọta ihe bụ ihe kasị mma mgbe ebe rawụta bụ usoro dị mfe ma ọ gaghị enwe ike iwe anyị ogologo oge.
1 Ebee ka ị wụnye rawụta?
2 Enwere m ndị na-eme ihe ọjọọ na njikọ Wifi m?
3 Gini mere njikọ Wifi m ji nwayọ nwayọ?
3.1 Ndenye aka mgbaàmà
3.2 Tụọ ọsọ nke njikọ Internetntanetị anyị
3.3 Njikwa 2,4 GHz
3.4 Njikwa 5 GHz
4 Otu esi emeziwanye ọsọ nke njikọ Wi-Fi anyị
4.1 Gbanwee ọwa nke netwọk WiFi anyị
4.2 Na ndị mgbaàmà Wifi
4.3 Site na iji PLC
4.4 Jiri ojiji nke 5 GHz
4.5 Gbanwee ihe ntanetị
5 Otu esi echebe njikọ WiFi m
5.1 Mac nzacha
5.2 Zoo SSID
5.3 Jiri ụdị WPA2
5.4 Kpọgharia aha ndị SSID
5.5 Gbanwee okwuntughe ndabara nke rawụta
6 Terminology na data iji tụlee
6.1 Njikwa 5 GHz
6.3 Mọdem / Mọdem-rawụta
Ebee ka ị wụnye rawụta?
Mgbe ị na-etinye rawụta nke ga-enye anyị njikọ Internetntanetị, anyị ga-eburu n'uche ụdị ụlọ anyị nwere: otu ma ọ bụ karịa ala. Na mgbakwunye, a ghakwara iburu ya n'uche maka ọnọdụ ya ebe a ga-eji njikọ ahụ tumadi, ma ọ bụ n'ime ime ụlọ anyị ma ọ bụ n'ime ụlọ nke anyị nwere ike ịmalite maka kọmputa ahụ. Ọ bụrụ na otu n'ime isi ihe anyị ga-eji njikọ Internetntanetị anyị bụ ịnụ ụtọ ị nweta ọrụ vidiyo, nhọrọ kachasị mma bụ idowe router n'akụkụ telivishọn inwe ike ijikọ tv ma ọ bụ igbe set-top nke anyị na-eji site na eriri netwọk. E mesịa, anyị ga-ahụ maka ịgbasa mgbaama Wi-Fi n'ụlọ ndị ọzọ.
Ọ bụrụ, na aka nke ọzọ, isi ihe anyị ga-enye ya ga-abụ ebe kọmputa ahụ dị, anyị ga-enyocha ma anyị ga-achọ ọsọ ọsọ kachasị, iji wụnye ya n'ime ụlọ ahụ, ma ọ bụ ọ bụrụ anyị nwere ike ijikwa na Wifi repeater. Ọ bụrụ na adreesị anyị mejupụtara ala abụọ ma ọ bụ atọ, nhọrọ kachasị mma bụ itinye ya na ala ebe a na-arụ ọrụ a na-arụ kwa ụbọchị, nke abụọ bụ n'ihe gbasara ala 3, ebe ọ bụ na mgbaàmà ahụ ga-eru, ọ bụghị na-enweghị nsogbu, ọlaọcha dị n'elu na n'okpuru.
Enwere m ndị na-eme ihe ọjọọ na njikọ Wifi m?
Ọ bụrụ na mmadụ jisiri ike ijikọ na njikọ Wi-Fi anyị, ọ bụghị naanị na ha nwere njikọ Internetntanetị anyị, kamakwa ha na-enwe na nchekwa na anyị nwere ike na-akọrọ. Iji lelee ma ọ bụrụ na ngwaọrụ ejikọrọ na njikọ anyị, anyị nwere ike iji ngwa mkpanaka dị iche iche ga-egosi anyị n'oge niile ngwaọrụ ejikọtara n'oge ọ bụla.
Mkpịsị aka - Network nyocha
Developer: Fing Nwere Ike
Ọ bụrụ na na ndepụta nke ngwa ahụ na-enye anyị n'ihi nsonaazụ netwọkụ anyị, anyị na-ahụ aha ngwaọrụ nke na-adabaghị na ndị na-ejikọkarị, mmadụ na-erigbu anyị. Anyị ga-ahụ gbanwere okwuntughe nke njikọ anyị ngwa ngwa na inntanetị na mgbakwunye na-ewere n'ime akaụntụ niile nchedo ụzọ na anyị na-egosi gị n'isiokwu a iji gbochie otu ihe ahụ ga-eme n'ọdịnihu.
Gini mere njikọ Wifi m ji nwayọ nwayọ?
Ọtụtụ bụ ihe ndị nwere ike imetụta mgbaàmà Wifi nke rawụta anyị, ihe na-eme ka njikọ na njikọta ngwa ngwa nke internet n’etiti ngwaọrụ dị iche iche ejikọrọ na otu netwọk ahụ.
Ndenye aka mgbaàmà
Idebe ihe ntanetị ma ọ bụ ihe mgbaàmà mgbaàmà dị nso na ngwa ọrụ dịka igwe nju oyi ma ọ bụ microwave abaghị uru, ebe ha na-eme dị ka ngịga Farady, ghara ikwe ka akara ndị ahụ gafere na mgbakwunye na-eme ka ike gwụ ha ike ntakịrị. Mgbe ọ bụla o kwere omume anyị ga-ezere ịtụkwasị ma ndị rawụta na a Wi-Fi mgbaàmà repeater nso ngwaọrụ ndị a. Na mgbakwunye, anyị aghaghi iburu n'uche ọwa nke rawụta anyị na-eji.
Imirikiti ndị na-agagharị agagharị na-enyochakarị ndị agha ejiri anyị gburugburu nke kachasị mma iji nye WiFi, ma n'ọtụtụ ọnọdụ a na-atụ anya ime ihe kpamkpam. Iji mara nke bụ ndị kasị nta jupụta ọwa, anyị nwere ike ime ka ojiji nke ngwa maka mobile ngwaọrụ na-enye anyị ozi a na ga-enyere gị aka n'ụzọ ziri ezi hazi anyị rawụta.
Tụọ ọsọ nke njikọ Internetntanetị anyị
Mgbe ụfọdụ, nsogbu ahụ nwere ike ọ gaghị adị n'ụlọ gị, mana anyị na-ahụ ya na onye na-eweta Internetntanetị, ihe na-anaghị eme ọtụtụ oge mana nke ahụ nwere ike ịbụ n'ihi nsogbu nke njupụta na ntanetị, nsogbu na sava ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ. Iji jide n'aka na nsogbu nke ịgba ọsọ adịghị n'ụlọ anyị, ihe kachasị mma bụ mee ule ọsọ ọsọ, iji chọpụta ma ọsọ anyị natara nke kwekọrọ na nke na-abịaghị.
Njikwa 2,4 GHz
Ndị na-eme njem, dabere na ihe nlereanya ahụ, na-enwekarị ụdị ìgwè 2 iji kesaa akara signalntanetị. Ngwongwo 2,4 GHz dị na ndị ọ bụla na-eme njem bụ ndị na-enye ọtụtụ ihe, mana ọsọ ha dị ntakịrị karịa nke a na-enweta na 5 GHz routers. N'ihi gịnị? Ihe kpatara ya abụghị onye ọzọ karịa mkpọchi nke netwọkụ ndị ọzọ na-eji otu egwu ahụ iji kesaa akara Internetntanetị. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ọsọ ọ kachasị mma iji ìgwè 5 GHz
Njikwa 5 GHz
Ndị na-eme njem nwere 5 GHz nwere ọsọ dị elu karịa ihe anyị nwere ike ịchọta na ndị na-anya ụgbọ okporo ụzọ GHz 2,4. Ihe kpatara ya abụghị onye ọzọ mkpọchi netwọk nke ụdị a nwere ike ịdị na agbata obi gị. Naanị ihe netwọk ndị a nwere bụ na oke dị oke karịa ihe anyị nwere ike ịchọta na band 2,4 GHz.
Ndị na-emepụta ihe maara banyere njedebe nke ndị agha abụọ na n'ahịa anyị nwere ike ịchọta ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị na-eme njem nke na-enye anyị ohere ịmepụta netwọk Wi-Fi abụọ n'ụlọ anyị: otu nke 2,4 GHz na nke ọzọ nke 5GHzN'ụzọ dị otú a, mgbe anyị nọ n'ọnọdụ oke nke akara 5 GHz, ngwaọrụ anyị ga-akpaghị aka na njikọ a ngwa ngwa. Ọ bụrụ, n'aka nke ọzọ, anyị esiteghị na nso nso nke netwọkụ a ngwa ngwa, ngwaọrụ anyị ga-ejikọ na netwọk 2,4 GHz Wi-Fi ọzọ na-akpaghị aka.
Otu esi emeziwanye ọsọ nke njikọ Wi-Fi anyị
Ọtụtụ mgbe ma ọ bụrụ na anyị chọrọ melite ọsọ nke njikọ Internetntanetị anyị, Anyị ga-eme obere ego, bido na euro iri abụọ ruo ihe dị ka 20.
Gbanwee ọwa nke netwọk WiFi anyị
Usoro a iji gbalịa imeziwanye ọsọ nke njikọ anyị, ekwuola m n'elu ma mejupụtara nyocha netwọkụ Wi-Fi dị nso chọpụta nke ọwa na-ebunye mgbaàmà ahụ. Dị ka iwu n'ozuzu, ọnụ ọgụgụ kachasị dị ala bụ ndị a na-ejikarị eme ihe, ọnụ ọgụgụ kachasị elu dị ntakịrị afọju.
Ihe nyocha Wifi
Ngwa a ga - enyere anyị aka i toomi netwọk Wi-Fi niile anyị na - erute ma gosi anyị ndepụta nke nke bụ ndị agha ejirila n'oge ahụ, ka anyị wee mara otu egwu anyị ga-esi mee mgbaama anyị.
Na ndị mgbaàmà Wifi
Ndị na-emegharị WiFi na-akwụ ụgwọ bụ ngwaahịa dị ọnụ ala anyị nwere ike ịchọta n’ahịa mgbe ọ gbasara ịgbasa akara ngosi WiFi na ụlọ anyị. Site na euro 20 anyị nwere ike ịchọta ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ngwaọrụ nke ụdị a. Ihe kachasị mma bụ ịtụkwasị obi na ụdị ndị a ma ama dịka D-Link, ụlọ ọrụ TPLink… ndị nọrọla na ngalaba a ọtụtụ afọ ma mara otu esi eme ihe nke ọma. Ha na-enyekwa nkwa nke ruru afọ atọ n'ọtụtụ ngwaahịa ha.
Ọrụ nke onye na-eme ihe ngosi Wifi dị nnọọ mfe, ebe ọ bụ na ọ bụ ọrụ maka ijide isi akara Wi-Fi na ịkekọrịta ya site na ebe anyị wụnyela onye nrụghachite. Ngwaọrụ a na - ejikọ na netwọk eletrik ma site na kọmputa ma ọ bụ ngwaọrụ mkpanaka anyị nwere ike ịhazi ya ngwa ngwa. Ee, inwe ike hazi ya ọ dị mkpa na anyị maara paswọọdụ nke netwọk WiFi anyị, ma ọ bụrụ na ngwaọrụ ahụ dakọtara na teknụzụ WPS dị ka router, ebe ọ bụ na n'ọnọdụ ahụ, anyị ga-agbanye bọtịnụ WPS na rawụta na onye nrụgharị.
Ọ bụ ihe amamihe dị na ya mgbe niile ịzụta mgbama ngosi Wifi na dakọtara na ìgwè 5 GHz, ọ bụrụhaala na onye ntanetị ahụ dịkwa otú ahụ, ebe ọ bụ na ma ọ bụghị na ọ dịghị oge ọ nwere ike ịmegharị ihe mgbaàmà na-adịghị abanye na ya. Ndị agha 5 GHz na-enye anyị ọsọ ọsọ dị elu n'adịghị ka ìgwè 2,4 GHz dịka m kọwara na ngalaba gara aga.
Site na iji PLC
Ihe dị iche iche nke ndị na-emegharị WiFi na-ejedebe ebe ọ bụ na a ga-enwerịrị onye na-emegharị ihe na nso ebe usoro ntanetị si nwee ike ijide mgbaàmà ahụ ma megharịa ya. Agbanyeghị, a raara ngwaọrụ PLC iji kesaa mgbama ahụ site na netwọkụ eletriki, na-agbanwe wiwi niile dị n'ụlọ anyị ka ọ bụrụ akara Wifi. PLC bụ ngwaọrụ abụọ na-arụkọ ọrụ ọnụ. Otu n'ime ha na-ejikọ eriri na ntanetị ozugbo na nke ọzọ arụnyere n'ụlọ, ọ bụrụgodị na akara ngosi WiFi adịghị (enwere uru ọ na-enye anyị).
Ozugbo anyị jikọtara ya, ngwaọrụ nke abụọ ga-amalite na-akpaghị aka njikọ Internetntanetị ahụ dị na wiring nke ụlọ anyị na-enweghị hazi akụkụ ọ bụla ọzọ. Typedị ngwaọrụ a ọ dị mma maka nnukwu ụlọ na ọtụtụ ala, ma ọ bụ ebe ndị na-emegharị ihe na Wifi anaghị erute n'ihi ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke esemokwu ndị a na-ahụ n'ụzọ.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịzụrụ ngwaọrụ nke ụdị a, a na-atụ aro ya nọrọ ntakịrị ntakịrị ma zụta ụdị dakọtara na ndị otu 5 GHz, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na onye rawụta abụghị, ebe ọ bụ na ngwaọrụ nke jikọtara na rawụta ga-ahụ maka iji ohere kachasị ọsọ nke njikọ offeredntanetị na-enye.
Jiri ojiji nke 5 GHz
Ọ bụrụ na rawụta anyị dakọtara na ndị agha 5 GHz, anyị ga-erite uru nke ọ na-enye anyị, ọsọ dị elu karịa ìgwè 2,4 GHz nke ọdịnala. Iji lelee ma ọ bụrụ na ọ dakọtara ma ọ bụ na ọ bụghị, anyị nwere ike ịchọ nkọwa nke ihe nlereanya ahụ na orntanetị ma ọ bụ nweta nhazi ya wee lelee ma ọ nwere njikọ 5 GHz na ngalaba Wifi.
Gbanwee ihe ntanetị
Ọ bụrụ na adreesị anyị pere mpe ma anyị nwere ihu ọma inwe njikọ Internetntanetị, rawụta n'etiti ụlọ anyị, nhọrọ kachasị mma iji zere iji ndị na-eme mgbaàmà bụ ịzụta rawụta dakọtara na ndị otu 5 GHz, nke ga-enye anyị njikọ dị elu ọsọ, ọ bụ ezie na ya nso ruru bụ dịtụ ọzọ obere. Ndị a rawụta kwekọkwara na agbụ 2,4 GHz.
Otu esi echebe njikọ WiFi m
Ichebe njikọ Internetntanetị anyị bụ otu n'ime ihe anyị ga-ebu ụzọ mee mgbe echichi ahụ abanyela, iji gbochie ndị ọ bụla ọzọ achọghị ka ha nweta ọ bụghị naanị njikọ Internetntanetị anyị ma rite uru na ya, kamakwa nwekwara ike tnwee ike ịnweta folda nwere akwụkwọ na anyi eketala.
Otu ụzọ kachasị mma iji gbochie ịnweta njikọ Internetntanetị anyị bụ site na nzacha MAC. Ngwaọrụ ikuku ọ bụla nwere akara akwụkwọ ikike ya ma ọ bụ akara akara ya. Nke a bụ MAC. All routers ka anyị hazie MAC nzacha nke mere na otú a bụ naanị ngwaọrụ onye MAC na-edebanye aha na router nwere ike ijikọ na netwọk. Ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na ịntanetị anyị nwere ike ịchọta ngwa iji mepụta adreesị MAC, anyị ga-eburu n'uche na na mbụ ha ga-amata ihe ọ bụ, naanị otu ụzọ isi mee ya bụ site na ịnweta ngwaọrụ.
Ọ bụrụ na anyị achọghị ka aha nke netwọk anyị WiFi dịịrị onye ọ bụla, wee si otú a zere nsogbu ọ ga-ekwe omume, anyị nwere ike zoo netwọk WiFi ka ọ pụta naanị na ngwaọrụ ndị ahụ ejikọrọ na ya. A na-eji nhọrọ a eme ihe mgbe mgbe na ebe ịzụ ahịa na nnukwu ebe. Site na ịgaghị, ndị enyi ndị ọzọ ga - ahọrọ netwọkụ ndị ọzọ a na - ahụ anya.
Jiri ụdị WPA2
N'ihe banyere ichebe njikọ Internetntanetị anyị, rawụta na-enye anyị ụdị okwuntughe dị iche iche, WEP, WPA-PSK, WPA2 ... A na-atụ aro ya mgbe niile, ọ bụrụ na ọ bụghị iwu, iji ụdị paswọọdụ WPA2, paswọọdụ nke fọrọ nke nta ka-agaghị ekwe omume ịgbawa na ngwa dị iche iche anyị nwere ike ịchọta n'ahịa ma asị m ihe fọrọ nke nta ka ọ ghara ikwe omume n'ihi na ọ nwere ike were ọtụtụ ụbọchị, ọbụlagodi izu iji mee ya na ụdị ngwa a, nke ga-amanye ndị enyi nke ndị ọzọ ka ha daa.
Kpọgharia aha ndị SSID
Ngwa ndị raara nye ịgbalị ịkọwapụta okwuntughe anyị, jiri akwụkwọ ọkọwa okwu, akwụkwọ ọkọwa okwu ndị dabere na ụdị aha njikọ ahụ, ndị nrụpụta ọ bụla na onye na-eweta ọrụ na-ejikarị nke yiri ya, yana okwuntughe nke ụdị ndị ahụ. Ọtụtụ mgbe, paswọọdụ maka rawụta anyị dị na ala ya. Ọtụtụ mmadụ raara onwe ha nye maka ịmepụta ọba akwụkwọ ma ọ bụ ọdụ data na ụdị aha na okwuntughe ndị a, na site na ndị a ị nwere ike ịnwale ịnweta netwọk Wifi ndị dị n'ime iru gị ugboro ugboro. Site na igbanwe aha akara anyi, anyi g’eme ka udiri akwukwo okwu a ghara ibanye n’ime router.
Gbanwee okwuntughe ndabara nke rawụta
Akụkụ a metụtara nke gara aga. Ojiji nke ọba akwụkwọ ebe echekwara okwuntughe na SSIDs, aha njikọ Wifi, na-enye ndị ọrụ ohere ịnwa ịnweta netwọk anyị ohere, ọ bụ ezie na ọ dịpụrụ adịpụ, inwe ike ime ya. Iji zere nke a, ihe kachasị mma anyị nwere ike ime bụ ịgbanwe okwuntughe ndabara. Ọ bụ ihe amamihe dị na ya iji aha anụ ụlọ, ndị mmadụ, ụbọchị ọmụmụMfe icheta okwuntughe dika 12345678, okwuntughe, okwuntughe… ebe ha bu ndi mbu a nwale.
Ezigbo okwuntughe kwesiri itinye ya mkpụrụedemede obere na mkpụrụedemede obere, yana nwere ọnụọgụ na akara ngosi dị iche. Ọ bụrụ na anyị nwere mkpa ịhapụ onye ọbịa ka ọ jiri njikọ ourntanetị anyị, anyị nwere ike ịmepụta akaụntụ nnabata site na rawụta n'onwe ya nke ga-agwụ mgbe ọ bụla anyị chọrọ.
Terminology na data iji tụlee
Ọ bụghị ngwaọrụ elektrọnik niile dakọtara na ìgwè 5 GHz. Ndị kachasị ochie abụghị, kwuo na afọ 5 ma ọ bụ 6 ha anaghị adịkarị, yabụ ị kwesịrị iburu ya n'uche ma ọ bụrụ na ngwaọrụ gị enweghị ike ijikọ ụdị egwu a.
A rawụta bụ ngwaọrụ na-enye anyị ohere share njikọ internetntanetị site na modem ma ọ bụ modem-router.
Mọdem / Mọdem-rawụta
Nke a bụ ngwaọrụ nke onye ọrụ na-arụnye na adreesị anyị mgbe anyị were thentanetị. Ọtụtụ mgbe ha bụ ndị modem-routers, ya bụ, na mgbakwunye na nye anyị intaneti kwe ka anyi kekọrịta ya na ikuku.
SSID doro anya ma dị mfe aha nke netwọk anyị WiFi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Home » Otu esi eme ka ọsọ WiFi dị n'ụlọ anyị
Alberto Guerrero onye nhazi ihe oyiyi dijo
Ndewo, ezigbo ndụmọdụ, ezigbo ndụmọdụ, mana n'ozuzu ndị mmadụ achọghị ime ka ihe sie ike mgbe ị na-etinye nwughari (Wi-Fi Extender) na ọ bụrụ na ha aghọtaghị isiokwu ahụ, ha na-azụkarị ihe kachasị mkpa. M onwe m na-ahọrọ ndị na-eme 3-in-1 ma hazie ya dị ka ebe ịnweta, na-ezipụ eriri ebe onye na-emegharị ihe na-aga ma si otú a mepụta netwọk Wi-Fi ọhụrụ nke ga-ezitere m bandwidth niile m chọrọ, dabere na ọnụ ọgụgụ ahụ na anyị wụnye. Ekele.
Zaghachi Alberto Guerrero
Ezigbo ekele maka ama ahụ
Zaghachi mario valenzuela
Ndị a bụ egwuregwu efu na PS Plus maka July na onyinye ndị ọzọ na-atọ ụtọ